Al Shabaab iyo Shacab markale dagaalamay – Radio Baidoa
Al Shabaab iyo Shacab markale dagaalamay
Dagaal u dhaxeeyay shacab is uruursaday iyo xoogag ka tirsan ururka Al-shabaab ayaa maanta markale ka dhacay gobolka Mudug, gaar ahaan degaanka lagu magacaabo Maamiye oo ku dhaw degaanada Caad iyo Camaara oo shalay uu ka dhacay dagaal midkan la mid ah.
Wariyeyaal ku sugan gobolka Mudug ayaa waxa ay sheegeen dagaalkan inuu u dhaxeeyay dad xoolo dhaqato ah iyo dagaalyahanada Al Shabaab, wuxuuna dagaalka ahaa mid culus oo socday saacad iyo wax ka badan.
Dagaalka ayaa yimid kadib markii Shabaab ay dadka degaanka ku amreen inay soo wareejiyaan wiilashooda ay da’ooda u dhaxeyso 10 ilaa 15 sano, si loo askareeyo ugana qeyb qaataan dagaalka Shabaab ay kula jiraan ciidanka dowladda iyo kuwa AMISOM, balse dadka degaanka ayaa ka soo horjeestay arrintaasi.
Khasaaraha ka dhashay dagaalkan ilaa hadda si dhab ah looma xaqiijin karo, balse dad goobjoogayaal ah ayaa waxa ay sheegeen in dhinacyadan ay kala jiiteen Meydad iyo dhaawacyo inta uu dagaalka socday.
Dadka shacabka ah ee dagaalka kula jira Shabaab ayaa waxaa la sheegay inay heleen gurmadyo kala duwan oo uga yimid Koonfurta Mudug, taasi ayaana ku dhiiragelisay inay la dagaalamaan Shabaab.
Wararkii ugu dambeeyay ee naga soo gaaraya degaanka Maamiye ayaa waxa ay sheegayaan in hada xaaladu ay tahay mid degan, balse markasta la filan karo dagaal, maadaama dhinacydan ay weli is horfadhiyaan.
Saraakiil ka tirsan maamulka Galmudug ayaa waxa ay sheegeen inay wadaan abaaul ku aadan sidii ay u kaabi lahaayeen shacabka dagaalka kula jira Shabaab, waxayna tilmaameen in saacadaha soo socda ay ciidamo u dirayaan deegaanada Caad, Camaara iyo Maamiye.
Qarax lala eegtay ciidanka Kenya
Machadka Isgaarsiinta Qaranka oo dib loo hawlgeliyay (SAWIRRO)
Duqeyn ka dhacday Gobolka Bakool
Dowlada Oo beenisay Wararka sheegayay in Dhalinyaradii dibadda loo qaaday dagaal ku…
MW Farmaajo Oo Warqadaha Aqoonsiga Ka Guddoomay Danjirayaal Cusub